Jubbaland oo taageertay go’aamadii ka soo baxay Shirkii Wadatashiga Garowe. - Awdinle Online
Jubbaland oo taageertay go’aamadii ka soo baxay Shirkii Wadatashiga Garowe.
Dowlad goboleedka Jubbaland aya taageeray War-murtiyeedkii dhawaan kasoo baxay Shirkii Wadatashiga Puntland ee Saddexda Cisho ka socdey Magaalaalada Garoowe,kaas oo shalay Gelinkii dambe la soo geba-gabeeyey.
War-Saxaafadeed kasoo Baxay Xafiiska Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaasi u arkaan in uu ahaa mid looga hadlay waxyaabo dan u ah Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Puntland.
Ugu dmbeyn War-saxaafadeedka Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in loogu baaqayo,Dowlad goboleedyada,saamileyda Siyaasadeed ee dalka,Goleyaasha DFS iyo Ummadda Soomaaliyeed inay ka faa’iideystaan fursadaha Shirkaasi kasoo baxay.
Previous articleKonfur galbed oo Amartay in la xiro dhamaan Goobaha Waxbarashada deegaanadeeda
Next articleXukuumada Soomaaliya oo dhaqaale u raadinaysa Coronavirus.